Jwxo-shiilo oo ku Guulaystay in ay Difaacaan Baha Cabdile – Rasaasa News
Aug 24, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilo
Jwxo-shiil iyo beeshiisa ayaa waxay ka masuul yihiin dhibaatooyinka ka dhacay dhulka Somalida Ogadeeniya, waxaa kale oo ay masuul ka yihiin dhibaatooyinka ka dhex taagan dadweynaha Somalida Ogadeeniya gudo iyo dibadba. Jwxo-shiil, waxaa uu ku guulaystay in uu si cad isaga horkeeno beesha reer Cabdile isaga oo adeegsanaya wax loogu yeedhay Baha Cabdile.
Kolkii uu ku guulaystay Jwxo-shiil in uu duhur cad badhatamah Ogadeeniya ku dilo Dr. Dolal, daladii halganka Ogadeeniya, isaga oo isticmaalaya magac Jabhadeed runtuse ay aad uga fogtahay midaas, ee raga Dr. Dolal dilay dhamaantood ay ahaayeen hal beel. Jwxo-shiil ma aha nin halgan Jabhadeed wada laakiin waa nin huwan magac qabiil, waayo hadi uu mabaa,dii Jabhadeed ay ka dhabtay uma quudheen in uu dilo halgamyaasha xabada ku riday Itobiya nooca ay doonaanba ha ahaadaane.
Hadaba, kolkii ay fahmeen beeshii uu Dr. Dolal ka dhashay ee ree Ugaas Warfaa in waxa socdaa aanay ahayn nidaam Jabhadeed, ayaa waxaa uu bilaabay Jwxo-shiil in uu soo hawlgaliyo beelo ay walaalo yihiin beesha reer warfaa, isaga oo taas uga dan leh lafa Maroodi iyagaa la isku Jabiyaa.
Waxaa ay dadeynaha ree Ogadeeniya bilaabeen ololeyaal ay ku diidan yihiin sheegashada Jwxo-shiil ee ah in uu yahay nin wada danaha halganka ayJwxo horseedka ka tahay, waxayna cadeeyeen in uu yahay qabiil ku jabhad doonaya in uu durugsado degaan iyo darjo uusan mutaysan.
Jwxo-shiil, waxaa uu bilaabay in uu arbushaado ka sameeyo, Koonfur Afrika halkaas oo lagu xidhay dad ka soo horjeeda Jwxo-shiil, Jabhada Jwxo dadweynuhu wuu u dhaxeeya waa hadii ay sax tahay, dhibaatadii ka dhacdayna waa tii markhaatiga loo ahaa.
Waxaa xidgtay dhacdadii Kenya Nairobi, halkaas oo lagu tooriyeeyey laba nin oo reer wafaa ah, kolkii dambena ay kooxda Jwxo-shiilo [qabiil ku jabhad], uga baxeen arintii in ay xaliyaan beelaha dadkii dhibku kala gaadhay, aaway Jwxo-dii soo dagaal galisay ma wanaaga umbay kooxda Jwxo-shiil ku yihiin, awalba ma jirin ee waxaa dano gaar ah watay waa Jwxo-shiil. Arintaas waxaa lagu xaliyey qabiil xadhaadhsimihiina waxaa kala qaatay laba beelood.
Waxaa xigtay fool xumo ka dhacday dalka Ingriiska gaar ahaan London, halkaas oo waxyeelo uu Jwxo-shiil abuuray daraadeed la isugu dhacay, waxaana ay damceen odayaal ka socda reer Warfaa in ay xadhaadhsimo siiyaan ree Ugaas Nuur, nasiib daro weyn waxaa noqotay in beesha reer Ugaas Nuur ay diideen oo ay yidhaahdeen arintaas wxaa leh oo ka garbixi karta Jaaliyada Jwxo-shiil [bal day in dhaqankii madaxa lagaga tuntay]. Arintii waxay noqotay in Jaaliyada Jwxo-shiil ay dacwad ku soo oogto dad u dhashay reer Warfaa oo ay arintii Booliska tagto.
Nasiib darada iyo Fadeexada dhaqanka laga galay, waxaa dhaqankii dib u soo celiyey Booliska Ingriiska, isaga oo yidhi waa in Odayaasha labada reer ay arinta ku dhameeyaan xerada Booliska kana baxa arin Jaaliyadeed iyo Jwxo-shiil oo aan warkiisa hayno, sidaasina waxaa dhaqankii xurmadiisii u soo celiyey Booliska Ingriiiska.
Waxaa xigay dhinbaatadii Sweden oo ilaa iyo maanta uu Isbitaal ugu jiro nin Oday ah oo ka soo jeeda beesha reer Warfaa, oo aan ilaa iyo hada la garanaynin sababta loo dilay, balse dadka wax garadka ahi way fahamayaan sababta waxaa ka dambeeya Jwxo-shiil, wax uu u hurinayo arimaha noocan ah ma aha mid dan u ah dadweynaha Somalida Ogadeeniya iyo Jabhad toona, waa mid lid ku ah labadaba, laakiin Jwxo-shiil iyo qabiil ku jabhadba waxay moodayaan guul. Arinta Sweden oo hada uun cusub, kana dhacday dal ay aad shuurcdiisu u adag yihiin ayaan la ogayn waxa ay ku dambayndoonto xaalada Jwxo-shiilo.
Waxaa kale oo shalay uun ka dhacday London, arin fool xun oo u dhici lahayd sida mida Sweden laakiin ay goobta joogeen Boolis, arimahan joogtadad u dhacaya, ayaa waxaa ay Jwxo-shilo iska soo hormarinayaan dad loogu yeedhay Baha Cabdile, oo aan iyagu kaba fikiraynin wax uu wado Jwxo-shiil ee kaliya ay u muuqato, wax aan geedkaas gaadhsiisnayn, oo iyaga uun dib ugu soo noqonaya.
Hadaba, inaga oo ogg ama aragna arimahaas oo dhan, ayaanu marar badan ka digaynay in ay dadweynaha Somalida Ogadeeniya ka foojignaadaan arimaha ay soo abuurayaan Jwxo-shiil iyo Jwxo-shiilo [qabiil ku jabhad], oo iyagu u guntaday in ay iska horkeenaan beesha reer Cabdile, iyaga oo ayna soo gaadhin dhibaato lana fahamsanayn.
Mar labaad ayaa waxaanu ugu digaynaa dadweynaha Somalida Ogadeeniya guud ahaan, in dhibaatooyinkan uu Jwxo-shiil abuurayo in ayna wali fari ka qodnayn, wadaanan dadka uga digaynaa in ay ka foojignaadaan arimaha keeni isku dhaca dhexdooda ah, taas oo horseedi karta dhibaato gaadha gudaha Ogadeeniya.
Waxaa kale oo aan dadweynaha uga digaynaa in ay iska foogeeyaan Dambiile Jwxo-shiil, Jwxo-shiilo iyo waliba kuwa uu caajisku ku dilay dalalka reer galbeedka ee maalinba geed hadhsada.